Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Tv-ga Universal oo noqday shabakad Ciisaha Itoobiya iyo Djibouti ay cabashadoo​da ugu soo gudbiyaan dawlada Gadabuursi​ga
Tv-ga Universal oo noqday shabakad Ciisaha Itoobiya iyo Djibouti ay cabashadoo​da ugu soo gudbiyaan dawlada Gadabuursi​ga
Jan 31, 2013 SOMALI NEWS 0
Laga soo bilaabo doorashooyinkii ka dhacay somaliland ee lagu xoreeyey caasimadii boqortooyadii awdal ee gadabuursi waxaa soo baxay shabakad aan in yarna xishood lahayn oo weliba ay ka shaqeeyaan niman muuqoodu waaweyn yahay laakiin maskaxdoodu aanay caadi aheyn.
Shabakadaas magaceeda waxaa la yidhaahaa universal tv waxaanu ka diwaan gashan yahay dalka djibouti.
Tv gan wuxuu sii daayaa oo dadweynaha daawada usoo bandhigaa been aan sal iyo baar laheyn, wanjalaad,xaalad abuur,iska horkeen, eexasho,ciise isku dhedhejin, yaayaqso iyo waxyaabo la mid ah.
Shabakadani waxay habeen dhaaf u sii deysaa war been oo runta ka fog kuna saabsan dhulka gadabuursi ee saylac oo ciise ay si cad ugu sheegaan inuu leeyahay iyagoo marka ay waayaan dad ay sawir ka soo qaadaan rag guryahooda fadhiya ayey wareysi ka soo qaadaan codka qofkaana warka ayey ku soo daraan iyagoo odhanaaya aqoonyahan ka soo jeeda gobolka salal ee beesha ciise ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhnay isagoo ka hadlaya doorashada lagu shubtay.
Weli cod ama sawir qof gadabuursi ah may soo deynin waanay diideen oo waxay yidhaaheen tv ga ayaa lanaga xidhayaa hadaan gadabuursi ka soo deyno.
Dadka reer awdal ee qurbajoogu way ka mamnuuceen guryahooda in laga daawado shabakada ciisaha ee universal tv iyo HCTV oo ay isku mid yihiin.
Dumar buurbuuran oo reer jabuuti ah ayey tvga ka soo daayeen iyagoo been sheegaya kuna tilmaamay dumar xariirad jooga.
Ninka saylac ka soo dira waxaa laga keenay jabuuti habeen kastana wuxuu soo deyn jiray xayeysiis aan soconeyn isagoo been cad soo laaqlaaqaya.
Sida ay dad ciise reer jabuuti ah ay sheegayaan waxay yidhaaheen ismaciil geele ayaa lacag ku bixiya beentani oo ciise macaaradka iskaga jeedinaya islamarkaana tvga universal wuxuu ka diwaan gashan yahay jabuuti oo wax yar oo ciise ka soo hor jeeda ma sheegi karo.
Maanta dad xero qaxooti oo holland ku taala ku jira oo la yidhi waa la celinayaa ayuu soo daayey iyadoo dhowr qof ay afka ciisaha ku hadlayeen iyagoo leh saylac anagaa leh.
Hadaba waxaan talo ku soo jeedinayaa in si weyn loo cambaareeyo tv universal lana soo ururiyo dhamaan wararkii beenta ahaa ee uu ku taageeraayey beesha jabuuti iyo in awdal iyo salal iuo gabiley lagaga mudaharaado dacwadna la gaadhsiiyo laanta sirdoonka ingiriiska lagana mamnuuco dhulkeena labada tv waa UNIVERSAL TV IYO HCTV.
Xaylesalaase ayaa hada ka hor yidhi ma dhilaa dhul iga qaadi waxaan uga jeedaa ma tv ayaa dhul ciise u noqon.
Haddii ciise uu baryi lahaa gadabuursi inta uu isaaq baryayo beri hore ayaan dhulkoo dhan ku wareejin lahayn laakiin taasi may garan.
Waxaa la yaableh nin ku leh waxbaan kugu leeyahay hadana kuma baryayo ee nin kale ayaan baryayaa. Isaaq baryo wax kuma bixiyo ee rasaas buu wax ku bixiyaa ciisana ilaahay taasi wax uguma darin oo dagaal ma yaqaan.
Nimaad dili nimaad dagi nimaad dabin u qooleyso waa laysku kala daadiyaa yaanu kaa didine.
Maanta oo kale Maalin u baahan in baroor-diiq loo sameeyo Ciyaala isgoolkii Mingiste Ku Xasuuqa Boorama Somaliland oo ka maseyrtay aqoonsigii Mareyskanku siiyay dawlada Somaliya Iyo Qaraxii Madaxtooyada Somaliya oo looga shakisanyahay + Ninka isqarxiyay qabiilkiisa iyo Magaciisa